UJohn Nkengasong – uhlanganisa iAfrika ekulweni negciwane | Scrolla Izindaba
Izwekazi labantu abayisigidi esiyi-1.3 linemithombo elinganiselwe yokuvikela izifo, nomlando wokuhlushwa ubhadane olukhulu olubandakanya i-HIV / Aids, ikholera ne-Ebola.
Kodwa-ke, ngenkathi igciwane lishiye indlela yokufa nokubhujiswa konyaka wonke emhlabeni wonke, umthelela walo eAfrika ubukade ulula uma kuqhathaniswa namanye amagciwane.
UDkt uJohn Nkengasong, umqondisi we-Africa Centers for Disease Control and Prevention, ubungazwe umhlaba wonke ngokuletha amazwe angama-54 eAfrika ukuthi abe nobudlelwane, wenza akwazi ukuphendula ngempumelelo kulolu bhubhane kunamazwe amaningi acebile emhlabeni.
Isazi se-virologist esinolwazi sakhuthaza amazwe kulo lonke izwekazi ukuthi asebenzisane ukuqinisa ukuvinjelwa kusenesikhathi nokwakha amaketanga aphumelelayo okuhlinzekwa kwamanye amazwe.
Enkulumweni eyabanjwa ngoMandulo, uDkt uNkengasong wacaphuna amazwi oMengameli wokuqala wase-Ghana uKwame Nkrumah ezilalelini zakhe: “Kusobala ukuthi kumele sithole isisombululo saseAfrika ezinkingeni zethu, nokuthi lokhu kungatholakala ebunyeni baseAfrika kuphela.”
Yize kunokwanda kwamuva kwamacala e-Covid-19 kulo lonke elaseAfrika, futhi ikakhulukazi eNingizimu Afrika, lonke izwekazi liyaqhubeka nokubika amazinga okutheleleka aphansi kunaseNyakatho Melika naseYurophu.
Kuphephile ukusho ukuthi uDkt uNkengasong ufeza inhloso yakhe yokunqoba igciwane “ngobumbano lwaseAfrika” nangempumelelo enkulu.
NgoMandulo uhlonishwe yi-Gates Foundation ngendondo yowezi-2020 ye-Global Goalkeeper Award “yokuqinisekisa ukuthi izwekazi linemithi yokugoma nemithi eliyidingayo ukulwa ne-Covid-19.”